घर–आँगनमा रोपौं‌, औषधीय गुणले भरिपूर्ण यी वनस्पतिहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
हाम्रो घर–आँगन वा आसपासमा त्यस्ता अनेक वनस्पति छन्, जो औषधीय गुणले भरिपूर्ण छन् । त्यस्ता वनस्पतिलाई हामी दैनिक खानेकुरामा समावेश गर्न सक्छौं वा आवश्यकता परेको बेला सेवन गर्न सक्छौं । जस्तो कि पुदिना, घिउकुमारी, तुलसी, बोझो, पाखनबेद । यसबाहेक हामीले पहिचान गर्न नसकेका थुप्रै वनस्पति औषधीय महत्वका हुन्छन् । यस्ता वनस्पतिलाई घरकै आसपास वा आफूले सहजै प्रयोग गर्ने स्थानमा रोप्न र संरक्षित गर्न सकिन्छ। यसो गर्नाले प्रत्यक्षत केही लाभ मिल्छ ।
एक, आफूले दैनिक खानेकुरामा समावेश गरिन्छ, जसले शरीरलाई रोग निरोधक बनाउन सहयोग गर्छ ।
दुई, औषधीय मूल्यका वनस्पतिको संरक्षण हुन्छ ।
तीन, आफ्ना सन्तति वा भावी पुस्ताले समेत यसको गुण सहजै थाह पाउनेछन् ।
चार, कुनै शारीरिक समस्या परेको बखत सहजै उपलब्ध हुनेछ ।
यसरी घर आसपासमा के–कस्ता औषधीय महत्वका वनस्पति रोप्न सकिन्छ त ?
पुदिना खासगरी पेटको समस्यामा उपयोगी मानिन्छ । त्यस्तै रगत शुद्धीकरणमा पनि यसले सघाउ पु¥याउँछ । पुदिना हामी औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्छौं। यो बगैंचा, गमला जहाँ पनि रोप्न सकिन्छ।
यसमा १८ खालका धातु, १५ खालका एमिनो एसिड र १२ खालका भिटामिनहरू पाइन्छन् । यसको सेवनबाट धेरै पौष्टिक पदार्थहरू पाउन सकिन्छ । यसको काँडायुक्त पातहरूलाई काटेर पेस्ट निकाली बिहान खाली पेटमा ३–४ चम्चा खाएमा शरीरमा दिनभर शक्ति बढ्छ र शरीर चुस्तदुरुस्त हुन्छ।
हुन त हामीले तुलसीलाई घर–आँगनमा मठ बनाएर रोप्ने गरेका छौं। तुलसी आफैँमा सर्वगुणी भएकाले यसको संरक्षण आवश्यक छ। अर्कोतिर, यसको साइनो स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले सफा र सहज ठाउँमा हुनुपर्छ । घरको आँगनमा तुलसी रोप्दा त्यसको प्रयोगमा त सहज हुन्छ नै घरको वातावरण राम्रो बनाउँछ।
तुलसीको एक÷दुई पात नियमित रुपमा सेवन गर्दा रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ। चिसोका कारण ज्वरोले सताएको बेला तुलसीको पातमा अदुवाको केही टुक्रा मिसाएर उमाल्नुपर्छ। त्यसलाई सेवन गर्दा रुघा ज्वरो ठिक हुन्छ । तुलसीसँग जोडिएको यस्ता थुप्रै उपचार विधिहरू छन्।
अरू पनि खोजौं
यसबाहेक पाखनवेद, चमेलीलगायतका अनगिन्ती वनस्पति छन्। जसलाई घर आसपासमा रोप्न सकिन्छ। यस्ता वनस्पति खोज्न, पहिचान गर्न र संरक्षण गर्न सकिन्छ। (अनलाइनखबर बाट सभार)
बर्षातले समस्यामा परेका लाई राहत महसुस गराउछाै: नरेन्द्र साउद